GM3560T Chencan Size Big 5 Axis Ukubumbela CNC ishambi Process Centre - China Shandong Chenan Machinery
Chencan GM3560T Size Big 5 Axis Ukubumbela CNC kumzila Process Center
GM3560T na iziko self-ephuhliswe Chencan 5 xis machining, kunye yokuluka enamandla, ubungakanani yokusebenza enkulu, isantya ekhawulezayo, ngobuciko aphezulu kunye nexesha lift elide.
1. Sebenzisa uyilo-ancedwa kwikhompyutha ukuphumeza uyilo noshowo elilelona umatshini yakhe. Ngu gantry ezinokususwa kwaye imo itafile esingatshintshiyo, umatshini lonke welding kunye uqinisa uphahla lwentsimbi. Iimbambo Ukomeleza ofunwa ngaphakathi. Iinkqubo ezininzi unyango xi isiqabu ukuphucula kakhulu ngqongqo lonke umatshini yaye alungiswa yi unyango tempering lobushushu eliphezulu ukuqinisekisa ukuba uzinzo sidima, akukho lula ukuba zikhubazekile;
2. axis Z amkele ngqo eliphezulu TBI ngqo eliphezulu ibhola Screw kwaye yonke Z kunye nemali edibanise ipleyiti sebenzisa uyilo enzima ukuvumela ukuchana ophezulu kunye nozinzo xa umsebenzi izinto nzima;
3. Isikhokelo rail kunye nesakhelo zigqunyiwe ngaphakathi ubungqina luthuli. Uthuli design ubungqina uya kubagcina uhlambulukile;
4. axis Z design cylinder nitrogen balance ezimbini, ngempumelelo kunciphisa imoto xa kulayishwa amandla wandise ubomi inkonzo umatshini bakhe. Akukho umatshini mfuneko ukusetyenziswa uxinzelelo lomoya;
5.Switzerland Num inkqubo yolawulo 5 axis kunye nenkqubo lwe USB kunye nolawulo window ukwenza umsebenzi lula ngakumbi kwaye cabinet yolawulo kunye nenkqubo kobushushu USA;
6. T slot waphosa umsebenzi intsimbi itafile, inkqubo unyango eliphezulu tempering, akukho lula ukuba zikhubazekile. Ubude max kuba itheyibhile yokubeka into 2m ukuze yanele kwi container;
7. Ezinye uyilo kunye abaza kuzisebenzisa sisebenzisa brand phezulu, ezifana nenkqubo Oli auto, inkqubo oyile kwenkungu auto, okuzenzekelayo edibanise inkqubo abandayo chiller, Germany Igus intambo, phambi zokhuselo & ucango emva ... Bonke uyilo ukuqinisekisa yonke umatshini noompondo zihlanjiwe yokusebenza;
• ubukhulu siya Working: 3500mm * 6000mm * 2200mm;
• othini: Italy 24Kw yokuluka (A ± 120 °, C ± 360 °) kunye iseti yonke umgca 5 Phendula intloko;
• Isantya othini: 24000rpm / m;
• Uluhlu: Siphose itheyibhile yentsimbi;
• Num Switzerland servo Motor kunye nenkqubo drive;
• Switzerland Num inkqubo yolawulo 5 axis ne umsebenzi lokwenene 5 axis;
• XY axis: Ithunyelwe nedawo helical nangokusulela pinion ;;
• axis Z: Taiwan TBI ngqo ephakamileyo ibhola Screw;
• XYZ: Taiwan HIWIN 6 kwinqanaba kaloliwe square;
• magazini Tool: Linear lowu Uhlobo isixhobo kunye kumnini 8 isixhobo;
• Inkqubo ukuthambisa ajikeleze Automatic;
• Inkqubo oyile inkungu oluzenzekelayo;
• Inkqubo nitrogen anomoya;
• Amanye amacandelo zombane usebenzisa Schneider okanye Siemens;
1. icandelo Die: Nayiphi imikrolo ye-aluminiyam, alephuze amagwebu, iplastiki, PVC, iinkuni, fiberglass kunye nezinye izinto soft-zalo;
2. icandelo zomngundo: Naluphi na uhlobo imoto sokubumbela, ulisebenzisa isikhephe, ngumngundo Foundry, eyama sokubumbela, dia ukungunda, etc;
ishishini elihambisayo 3. Plate: yokugquma,-aluminiyamu, iplastiki kunye imichiza, i-PCB, yisa umzimba imoto, equbuda, umkhondo, iinkwenkwezi ibhodi anti-ezizodwa, epoxy, intlaka, ABS, PP, PE, kunye nezinye umxube carbon;
3 Axis Ikubumbe Cnc umzila
4 Axis Ikubumbe Cnc umzila
5 Axis Ikubumbe Cnc umzila
siwisa Ikubumbe Machine
China Ikubumbe Cnc Machines Factory
Design Ikubumbe Cnc Machine Centre
EPS Foam sokubumbela Cnc Machine Centre
EPS Ikubumbe Cnc umzila
yangaphandle I Wall Design Ikubumbe Cnc
Five Axis Ikubumbe Ukwenziwa Centre
Foam sokubumbela Ukwenza Cnc umzila
Foundry Ikubumbe Cnc Machine
ulisebenzisa Cnc Factory
Ikubumbe Cnc Machine
Ikubumbe Cnc Machine Centre
ulisebenzisa Cnc Machine Centre Factory
Ikubumbe Cnc umzila
• Umngundo Maker Cnc Machine Centre
ulisebenzisa Ukwenza Cnc umzila Machines
lokumpompa Ikubumbe Ukwenza Cnc Machine
Umfanekiso sokubumbela Cnc Machine
GM3060T Chencan Big Ubukhulu 5 Axis Ikubumbe Processing ...
GM1530T Chencan 5 Axis CNC kumzila Machine